YIXING International Logistics (Guangdong) Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny Aogositra 2006, hatramin'ny niorenany, nanolotra andiana vahaolana fandefasana entana iraisam-pirenena ho an'ny ozinina famokarana nentim-paharazana izahay, tonga mpisava lalana amin'ny lozisialy fandefasana ranomasina amin'ny tsipika manokana Sino- US .
Foana, ny orinasanay manokana amin'ny fampivoarana ny fitaterana lozisialy tsipika iraisam-pirenena Sino-US, toy ny fandefasana FCL sy LCL, ny fivarotana any ivelany any Etazonia, ny fivezivezena, ny fanaterana isan-trano, ny serivisy logistika ao Etazonia, dia sisintany iray fitantanana rojom-pivarotana lozisialy sy serivisy fitehirizana lozisialy miampita sisintany.
Ny sofa dia tokony misafidy ny fandefasana ranomasina FBA
Miss Lin dia mpivarotra orinasam-barotra any Dongguan, sofa lehibe amidy manerana ny firenena. Mba hivarotana tsara kokoa ny sofa, dia nanokatra magazay teo amin'ny sehatra Amazon i Miss Lin.
Ny YiXing Global Logistics dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy sariaka amin'ny seranam-piaramanidina amerikana maro toy ny UPS, DHL, Federal, United Airlines, sns ...
FBA FCL & LCL mankany Etazonia
Manana fandefasana mivantana inefatra isan-kerinandro any Los Angeles, Etazonia izahay, fahanterana haingana, vidiny ambany. Afaka manome hetra fonosana mazava indroa amin'ny serivisy varavarana izahay.
JEREO NY POSTS BLOG REHETRA
Loharanon'ny trano fivarotana OVS
Manome ny fandraisana sy ny fandefasana, ny fanasoketana, ny fametahana ny marika, ny palletization, ny fitehirizana fotoana fohy sns.
Fahaizana mahery vaika
Izahay dia manana mpiasan'ny fadin-tseranana tranainy manana fahatakarana lalina momba ny fitsipiky ny fadin-tseranana ao amin'ny firenena nafarana, miaraka amin'ny firaketana mazava momba ny fadin-tseranana.
Fahombiazan'ny fotoana maharitra amin'ny FCL & LCL
Nizaha ny tsipika fandefasana mahomby sy mahomby mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa, manome ny serivisy isam-baravarana ho an'ny mpanjifa Amazon manerantany, haingana, mora kokoa, mora vidy kokoa!